RASMI: Ururka Ciyaartoyda Horyaalka La Liga Oo Qoraal Rasmi Ah Ku Shaaciyay Go'aankooda Kama Dambeysta Ah Ee Kulanka Girona v Barcelona. - GOOL24.NET
Ururka ay ku bahoobeen ciyaartoyda horyaalka La Liga ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan AFE ayaa qoraal rasmi ah ku shaaciyay go’aankooda kaga aadan qorshaha uu hoggaaminayo madaxweynaha horyaalkaas ee Javier Tebas ee ah in kulamo La Liga ah lagu ciyaaro carriga dalka Maraykanka.
Ururkan ayaa waraaq u gudbiyay horyaalka La Liga iyaga oo diidaya fikradaha aaminsan in kulanka kooxaha Barcelona iyo Girona ee bisha January lagu ciyaaro dalka Maraykanka.
Qoraalkan kasoo baxay Ururka ciyaartoyda horyaalka La Liga ayaa caqabad ku ah madaxweyne Tebas oo haatan kaliya haysta taageeraha labada kooxood ee Girona iyo Barcelona, Qaar kamid ah jamaahiirta kooxahaas iyo waliba shaqalaaha muuq baahiyayasha.
Qoraalka AFE ayaa u yaalay sida tan “Ururka kubadda cagta ee ciyaartoyda Spain (AFE) waxa uu doonayaa inuu waxyaabahan soo socda soo bandhigo kaddib markii aanu helnay xogo ku saabsan kulanka Girona v Barcelona kaas oo La Liga uu doonayo in lagu ciyaaro Miami”
Qoddobka Koowaad: AFE waxa ay La Liga ku wargalisay in xogta la shaaciyay aysan si fiican u qeexayn maqaalada kala ah 8, 9 iyo 37 ee ah inaan la qasi doonin heshiis wadareedka.
Qoddobka Labaad: Intaa waxa dheer, AFE waxa ay xasuusinaysaa (La Liga) in wakhti xaadirkan aysan jirin ansixin sax ah oo ah in kulankan lagu ciyaaro Maraykanka/
Qoddobka Saddexaad: Sidaa darteed maqnaanshiiyaha xogtaas kor lagu soo xusay, AFE waxa ay La Liga kala xidhiidhay inaanay ansixinayn kulanka.